Keating “Cawaaqib xumo ayuu la kulmi doonaa Madaxweynaha cusub”
Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee arrimaha Soomaaliya Micheal Keating ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo la xiriira Doorashada Soomaaliya, isagoo marka hore soo dhaweeyay shaqada wadajirka ah ee ay hayaan xubnaha ka shaqeynaya Doorashada, ee ah in hanaanka la boobsiiyo ama dib loo dhigo.
Micheal Keating ayaa waxa uu sheegay muhiim in ay tahay Doorashada Soomaaliya gaar ahaan mida Madaxweynaha in ay ku dhacdo si xor iyo xalaal ah oo an laheyn musuq maasuq.
Keatinta ayaa sheegay hadii Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya qaab sharci daro ah lagu soo doorto in uu la kulmi doono cawaaqib xumo, marka loo eego qaabka ay ula shaqeyn doonto Beesha Caalamka.
“Xubnaha Doorashada ilaa iyo hada wax wanaagsan ayay qabteen, waxaa muhiim ah Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya in ay ku dhacdo si xor iyo xalaal ah oo an laheyn musuq maasuq, Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya qaab sharci daro ah hadii lagu soo doorto waxa uu la kulmi doonaa cawaaqib xumo, oo ku aadan in Beesha Caalamka ay si wanaagsan ula shaqeyso.” Ayuu yiri Micheal Keating.
Waxa uu sheegay in uu jiro wal wal badan oo ku aadan in lagu shubto Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya, maadaama Doorashooyinkii xildhibaanada Baarlamaanka qaarkood si musuq maasuq ah ay ku soo dhamaadeen.
“Waxaa jira wal wal badan oo ay qabaan Musharaxiinta Madaxweynayaasha qaar, kaas oo ku aadan in lagu shubto codadka, taasina waa muhiim in laga hortago, Musharaxiinta Madaxweynaha ee ragga waxa ay bixiyeen 30,000 oo Dollar, halka Musharaxiinta Madaxweynaha ee Dumarka ay bixiyeen 15,000 oo Dollar, qeyb ka mid ah lacagahaasi waxaa loogu deeqi doonaa dadka ay saameeyeen Abaaraha.” Ayuu mar kale yiri Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee arrimaha Soomaaliya.
Hadalka Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee arrimaha Soomaaliya Micheal Keating ayaa u muuqda mid ay Beesha Caalamka uga digeyso musuq maasuqa laakiin dad badan ayaa aaminsan in uu jiri doono musuq maasuq iyo in codadka lagu shubto.